android ဖုန်းအဘို့ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာ APK ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာ
ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာ APK ကို
ဘားကုဒ် Scanner လျှောက်လွှာတက်ဘလက်နှင့် phone.Barcode Scanner app ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အစွမ်းထက်ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာ, လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်အစွမ်းထက်ဘားကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကိုနှင့် qrcode စကင်နာများနှင့်ဘားကုဒ်ကိုမီးစက် App ဖြစ်ပါတယ်။
qrcode ကင်နာ app ကိုမြန်ဆန်စွာပူဇော်မည်, လျော့နည်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် functional ဖြစ်စေမဆို QR Code များဖတ်ခြင်း, ဘားကုဒ်ကို, matrix ကို code နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအနေဖြင့်အများဆုံးအရေးပါသောအအဆက်အသွယ်အင်ဖိုရတဲ့ပုံပေါက်!
အစာရှောင်ခြင်းကုဒ် scan နှင့်သွားလာရင်းသီးသန့်အပေးအယူ, ကူပွန်, ပြိုင်ပွဲနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုခံစားရန်ဘားကုဒ်ကို Scanner app ကို။ အဆိုပါစကင်ကို QR code ကိုအင်္ဂါရပ်များနှင့်လက်လှမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုမှု Make နှင့် Wi-Fi ကွန်ယက်သို့မဟုတ်သင်တို့ပတ်လည်လာမည့်စတိုးဆိုင်ကိုရှာပါ။
ကုဒ်စာဖတ်သူကို app ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုမှအဆက်အသွယ်အင်ဖိုရရန်သင့်အားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကွန်ယက်အဖြစ်အပျက်, သို့မဟုတ်သင့်ဖြစ်နိုင်သော client ကိုသို့မဟုတ်သင်အထင်ကြီးဖို့လိုအပ်ဖောက်သည်မှသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အဆက်အသွယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုယ့် app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မှာအားလုံးအချိန်မ၌သင်တို့၏လိပ်စာစာအုပ်မှအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို add!
သင်တို့သည်လည်း url များ, ပုံများ, ကတ်များနှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းများသောပိုပြီး scan, သူတို့ကိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိထုတ်ကုန်များ QR code ကို scan နိုငျပါသညျ! ရိုးရှင်းစွာအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်လိုအပ်သတင်းအချက်အလက်ရ။
မဆိုဘားကုဒ်ကို၏ Fast ဒီကုဒ်ဒါ
ကျွန်ုပ်တို့၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့နဲ့ဒီကုဒ်ဒါနည်းပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားအောင်မြင်သော app ကိုဘားကုဒ် Scanner လည်းဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ်။ QR Code ကို, ဒေတာများ Matrix, Aztec, PDF417, 1D ကုန်ပစ္စည်းအများအပြားပိုပြီး: ကွောငျ့နှင့်ဖို့အတွက် QR Code ကို Rader ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုတဲ့ကျယ်ပြန့်အရည်အသွေးကိုကုဒ်၏, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုမဆို barecode scan နှင့်ရန်ဒီကုဒ်နိုင်ကြပါ!
သငျသညျအစားအခြားအ QR ကုဒ်ကိုစကင်နာ apps များသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်နည်း အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များ, ဖိုသူတို့ကိုအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ:
လျင်မြန်စွာသမိုင်းကို item ကိုရှာဖွေအစွမ်းထက်ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်✓။
✓ကျနော်တို့သမိုင်း tab ကိုသင်တို့အဘို့အားလုံး scan ဖတ် QR codes တွေကိုကယ်တင်မည်။ သင်အလွယ်တကူအကြာတွင်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကိုရယူနိုငျပါသညျ။
✓အများအပြားအကြောင်းအရာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖူးသလော သင်အလွယ်တကူသင်တို့အဘို့ရှာကြသည်သောအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းထက်ရှာဖွေရေး tool ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်အောင်✓တောင်မှသင်ကသမိုင်းပစ္စည်းများ sort နိုင်ပါတယ်။
• Viewfinder အရောင်:
✓ငါတို့သည်သင်တို့ကိုချစ်လိမ့်မည်ဟုတစ် feature အသစ်တီထွင်! အခုတော့သင် QR code ကိုပိုပြီးမြင်နိုင်စေဖို့အတွက် setting များကို tab ကိုထံမှသင်လိုချင်သည့် view finder ပါအရောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ရုံဖို့အတွက် QR Code ကိုမှာကင်မရာကိုညွှန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကိုချက်ချင်း scan အကြောင်းအရာပြပေးလိမ့်မယ်: ဒါဟာလွယ်ကူသောကြောင့်ပဲ! သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းအပေါ်ဝဘ်လိပ်စာ, အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုသို့မဟုတ် Wi-Fi ကို access ကို password များစာရိုက်မဆိုပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းမနေပါနဲ့။
ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း QR Code ကို Reader ကိုနှင့် Scanner Download များနှင့်အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးအခမဲ့ကင်နာ app ကိုပျော်မွေ့!
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြွအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် adored ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။
ကျနော်တို့သင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများနှင့်မွမ်းမံမှုများဆောင်ကြဉ်းဆက်လက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကို "barcodescanerreader@gmail.com" မှာသင့်ထံမှကြားပါစေအခမဲ့ခံစားရပါ။
- တိုးတက်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးနှင့် privacy ကို features တွေ။
1.91 ကို MB
QR Reader ကို: QR ...
QR & ဘားကုဒ်မှာ Data ...
QR code စာဖတ်သူ -